Kofi Tafura Fekitori - China Kofi Tafura Vagadziri, Vatengesi
Yakagadzirirwa iyo minimalist inoda yakanyanya kuchengetwa, ino yazvino kusimudza-kumusoro kofi tafura yakanakira chero imba yekutandarira. Yapedziswa neyakajeka chena lacquer, yayo chic yakachena mitsara inosanganiswa neazvino yakabwinyiswa chrome. Vagadziri vanoda kwayo nyore kusimudza kumusoro.
Iyi yekudyidzana inosimudza pamusoro chena tafura yekofi inosanganisa kunakidzwa uye kugona kwevanhu. Inoratidzira neinogadziriswa kukwirira pamusoro iyo inopa iyo yakakwana kukwirira kwako kana iwe uchishanda kana kunwa kapu yekofi, uye yakavanzika chengetedzo pasi petafura yepamusoro uye nzvimbo yekuchengetera pazasi petafura yepamusoro iyo inoita kuti ino yakanaka chidimbu chishande futi, zvakakodzera kuva!